हेलिकप्टर पाउने हो भने हरेक नेपाली तातोपानी जान चाहन्छन् । उनीहरूलाई पनि केही न केही रोग छ । तिनका पति वा पत्निहरू पनि बाथका रोगी होलान् । तातोपानीमा डुबिरहेका बेला यो कुरा सोच्नुभयो कि भएन, कुन्नि ! पुरा पढ्नुहोस्
नर्सिङ प्रशासकले नर्सिङ जनशक्तिलाई संस्थामा काम गर्ने अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्छ । नर्सिङ अनुसन्धानकर्ताले नर्सिङ सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने समयसापेक्ष ज्ञान तथा सीपको खोजी गर्नुपर्छ । यस्ता सुधार भए नर्सिङको गरिमा अझ बढ्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
२१ औँ सताब्दीमा दौडी रहँदा समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिले नौलो लाग्ने हर कुरा आजभोली सामान्य हुँदै गएका छन् । त्यसको एक उदाहरण हो मानिसले आफ्नो लैङ्गिक अवस्थाको बारेमा खुलेर बोल्नु । पछिल्लो समय समलिङ्गी ब्यक्तीहरु खुल्न थालेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, मंसिर २, २०७५
प्रत्येक बर्ष आयोजना गरिने अक्सफाम प्रतियोगीताका विगतका नतिजाहरुमा नेपालीहरुलेनै शिर्ष उपाधी उचालेका थिए । ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसाथ प्रतियोगीतामा सहभागी भएको नेपाली टिमले पाएको उपाधी सन्तोषजनक भएको र आगामी दिनमा अझ मेहनत गर्ने प्रेरणा मिलेको बताए । पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं निवासी २१ वर्षिय सुशनले उक्त प्रतियोगितामा विश्वका अन्य २४ युवाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ्न् । चौथौं संस्करणको मिष्टर युनिभर्सनल एम्बसडर प्रतियोगीताको ग्राण्ड फाइनल यही नोभेम्बर २४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा संम्पन्न हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
साँइलीको पोस्टर सार्वजनिक
चैत्र १५ गतेलाई रिलिज डेट तय गर्दै चलचित्र साँइलीको फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । रामबाबु गुरुङको लेख तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको शिर्षक सर्वाधिक चर्चित गीत सुन साँइलीबाट सापटी लिइएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह एक नयाँ चलचित्रमा एकैसाथ देखा पर्ने भएका छन् । नाम सार्वजनिक नभएको एक चलचित्रका लागि यि २ कलाकार अनुबन्धित भएका हुन् । चाँडै नाम घोषणा गरिने यो चलचित्र हेमराज बिसीको लेखन तथा निर्देशनमा तयार हुने छ । पुरा पढ्नुहोस्
त्यतिबेला लुकी–लुकी प्रचार गर्नुपर्ने कन्डम अहिले नेपाली बजारमा बर्सेनि ५ करोड थान खपत हुन थालेको छ । यद्यपि यो पनि हुनुपर्ने जति पर्याप्त नभएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । अझै पनि खुल्ला रूपमा कन्डम उपलब्ध नहुनु, यौन शिक्षाका विषयमा खुलेर बहस नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको डा. मरासिनीको अनुभव छ । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, मंसिर २, २०७५
याक अट्याक माउन्टेन बाइक रेस प्रतियोगिता–२०१८ को उपाधि क्यानाडाका करी वालेसले जितेका छन् । उनले १ सय ५८ किलोमिटरको दूरी १२ घण्टा ३० मिनेट ५० सेकेन्डमा पूरा गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्